Ama-Disc ongalalela lo Okthoba | Bezzia
Amarekhodi wokuthi ungalalela lo Okthoba
UMaria vazquez | 07/10/2021 12:00 | Izindaba
Kule nyanga unethuba lokuzwa okokuqala ngqa ama-albhamu amasha edlanzana labaculi. E-Bezzia asikwazi ukubabala bonke, ngakho-ke senze ukhetho oluncane lwabaculi noma amaqembu ayi-6 lokho sikhiphe noma sizokhipha i-albhamu entsha kule nyanga. Yikuphi ofuna ukukuzwa?
1 ENingizimu esigodini - Quique González
2 Konke kuzoba nengqondo ekugcineni - uJames Arthur
3 Ishumi nesikhombisa lihamba ngaphansi - uSam Fender
4 Umfula netshe - Morgan
5 Izinkulungwane zezimpi - uMalú
6 Ama-banisters aluhlaza okwesibhakabhaka - uLana del Rey
ENingizimu esigodini - Quique González
Ngo-Okthoba 1, Okthoba XNUMX wabona ukukhanya kwe-albhamu entsha kaQuique Gonzalez: Sur en el valle. Iqoqo le- Amathrekhi ayi-12 wemvelo ebonakalisiwe yobukhona, oqophe ezungezwe ngabaculi abajwayelekile abanjengoToni Brunet (abakhiqizi nama-guitar), Jacob Reguilón (bass), Eduardo Olmedo (izigubhu) no-Alejandro Climent (pianos).
Lezi zincwadi ziphinde zasayinwa uQuique González Ngaphandle kokuthi "Akusilo iqiniso" nguKirmen Uribe. Ikhishwe ilebuli yeCultura Rock Records, ifaka ukwahlukaniswa kwamalungu kaMorgan: David Schulthess "Chuches" (Hammond noWurlitzer) noCarolina de Juan (amaphimbo asekelayo). Kusukela ku-albhamu sesikwazile ukulalela iMay I die noJade, okuyi-video ongayithokozela ngezansi.
Konke kuzoba nengqondo ekugcineni - uJames Arthur
Kuzofanele ulinde kuze kube kusasa ukuzwa Konke kuzoba nengqondo ekugcineni, i-albhamu kaJames Arthur yesine. Iqoqo lamathrekhi ayi-14 nge Umuthi njengowokuqala ongashadile, esikwazile nokuzwa ngoSepthemba, i-Avalanche no-Emily.
I-albhamu isimile ekhaya, nabantu abambalwa, okuye kwamvumela ukuba abe sengozini kakhulu kunakuqala. Ngemuva kokuthengisa amarekhodi angaphezu kwezigidi ezingama-30 ngamaphrojekthi wakho wangaphambilini, ngabe lo msebenzi uzophinda futhi uwunxenxe umphakathi?
Ishumi nesikhombisa lihamba ngaphansi - uSam Fender
Ishumi nesikhombisa elihamba ngaphansi yi I-albhamu yesibili kaSam Fender. Ikhishwe yiPolydor Records, i-albhamu yaqoshwa eNorth Shields futhi yakhiqizwa nguBramwell Bronte, njengoba kwaba njalo ngesici sakhe sokuqala, imicibisholo yeHypersonic (2019). Kuzoba ngenye yama-albhamu azokhishwa kusasa, yize usuvele ungayithenga kuwo wonke amapulatifomu.
Mayelana nale albhamu entsha uSam Fender uthe: «Yindaba yobudala ezayo. Kumayelana nokuba mdala. Kungumgubho wempilo ngemuva kobunzima, nomkhosi wokusinda. Ithrekhi enikeza i-albhamu igama layo isebenze njengokubuka kuqala kokuqala. Kwabe sekufika u-Aye nokwehlisa.
Umfula netshe - Morgan
Ngo-Okthoba 15, The river and the stone, the I-albhamu yesithathu kaMorgan, iqoqo lezingoma eziyi-10 lapho baqala khona ukusebenza ngemuva kokuboshwa nguCovid-19, nefilosofi efanayo njalonjalo: "thatha imibono embalwa bese ucabangisisa nabo uzama ukuhlola izindawo, imiqondo nemisindo kancane."
Ngemuva cishe konyaka kusebenza, ekuqaleni kuka-2021, iqembu laseSpain laqopha izingoma ku- Isitudiyo seLe manoir de Léon eFrance. Ngokukhiqizwa nguCampi Campón, okuxutshwe nguStuart White eLos Angeles, kanye nokuqondiswa nguColin Leonard e-Atlanta, i-albhamu yethulwe noAlone njengokuhamba phambili kokuqala, kwalandelwa uMfula.
Izinkulungwane zezimpi - uMalú
Amanye ama-albhamu ozokwazi ukuwalalela kulenyanga ka-Okthoba yiMil Batallas, i-albhamu yeshumi nambili esalindwe ngabomvu nguMalú. Kuzoba ngo-Okthoba 22 lapho lo msebenzi omusha uzothengiselwa umculi waseSpain usebenze nomdidiyeli uPablo Cebrián. "Ingoma ngayinye iyimpi, impi ngayinye umzuzwana wokuzizwa nokuphila ...", kuphawula umculi ngale phrojekthi.
Imfihlo yamaphimbo kwakuwukuhlola kuqala kwe-albhamu kwase kulandela ithrekhi enikeza i-albhamu igama layo. Okunye okufakiwe kulo msebenzi yiWeaving Wings njengengoma yebhonasi, iculo elakhishwa ngo-Ephreli 29, 2020 ngesikhathi kuqala ubhadane lweCovid-19, lapho azindla khona ngomama wakhe ozayo ngaleso sikhathi. Ngaphezu kwalokho, i-albhamu izofaka i- isivakashi esikhethekile, uMario Domm oqhamuka eqenjini laseMexico iCamila, elizohamba naye ku-After the Storm.
Ama-banisters aluhlaza okwesibhakabhaka - uLana del Rey
AmaBlue banisters yi I-albhamu yesibili kaLana Del Rey kule 2021 ngemuva Ama-Chemtrails ngaphezulu kwekilabhu lezwe. NgoMeyi 20, 2021, kwakhishwa amathrekhi amathathu njengokubuka kuqala lo msebenzi omusha: Ama-blue banisters, i-Text book ne-Wildflower firefire. Abokuqala ababili baqanjwe noGabriel Edward Simon, owokugcina oqanjwe nguLana Del Rey noMike Dean ophinde abe ngumdidiyeli wale ngoma. Ezinyangeni ezimbalwa kamuva, ngoSepthemba 8 i-Arcadia yakhululwa.
Ngokuvumelana ne-premiere ye-Arcadia, lo mculi ubeke amazwana: «Ngicabanga ukuthi ungasho ukuthi le albhamu imayelana ngokuthi nganginjani, kwenzekeni nokuthi nginjani manje. Uma unentshisekelo, buyela emuva ulalele izingoma ezintathu zokuqala engizishicilele. Balandisa isiqalo. Le ngoma idlala phakathi nendawo futhi lapho irekhodi liza, uzozwa ukuthi sikuphi namhlanje. Njengoba ukugxeka okuqhubekayo bekuzama, okungenani kungiphoqelele ukuthi ngihlole umndeni wami, ngijule ngijule, futhi ngiqhubeke ngifakazele iqiniso lokuthi uNkulunkulu unendaba nokuthi ngihamba kanjani emhlabeni. Futhi phezu kwakho konke ukungabaza mayelana nokwenza sengathi ubuthakathaka kanye nezincazelo ezingenangqondo zokungakhombisi umthwalo ophelele, kufanele ngithi ngikujabulele ukuhamba emhlabeni ngokumangalisayo, njengowesifazane onomusa nesithunzi. Ngibonga abangani bami kule minyaka engu-18 edlule abebeyisibonelo sokuheha, hhayi ukukhushulwa. Angikaze ngizwe isidingo sokuzikhangisa noma sokuxoxa indaba yami, kodwa uma unentshisekelo, le albhamu iyayitshela futhi ayikho enye into ayenzayo. "
Khumbula, wonke lawa ma-albhamu ongawalalela ngaphambi kokuphela kuka-Okthoba. Uzoqala ngamuphi?
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Izindaba » Amarekhodi wokuthi ungalalela lo Okthoba
Yiziphi izingubo ezizosetha umkhuba lokhu kuwa futhi ungazi namanje?
Ungayibuyisa kanjani i-dresser endala igxathu negxathu